I-Android ibuyela ku-kernel 3.3 | Kusuka kuLinux
I-Android ibuyela ku-kernel 3.3
Izinsiza nezici ezahlukahlukene ze-Android sezihlanganisiwe, futhi okuningi okuningi kuzolandela ngokuzayo. Lokhu kuzokwenza izinto zibe lula kuwo wonke umuntu, kubandakanya nomphakathi. Android, noma ukwabiwa kwe- Linux abafuna ukusekela izinhlelo ze-Android.
Singahle singaboni i- umthelela omkhulu yalolu shintsho ngokushesha, kepha kusho ukuthi ezinyangeni naseminyakeni ezayo kuzoba lula kakhulu ngalo onjiniyela de Linux bekezela izinhlelo Android futhi okuphambene nalokho.
Isikhathi eside, ikhodi ye-Android ibingakahlanganiswa nezinqolobane ze-Linux ngoba onjiniyela bawo womabili amaphrojekthi bebengavumelani. Ngemuva kweminyaka eminingana besebenzela lo mehluko, le misebenzi emibili ekugcineni isihlangene futhi izingxoxo ngokusobala zishiyiwe ngemuva. Okungakwenzanga kwaba yi-kernel 3.3 kuzohlanganiswa nokukhishwa okuzayo.
Lokhu kusho ukuthi i-kernel ingasetshenziswa kumadivayisi we-Android ngqo nangokuphambene nalokho, ngoba iletha abashayeli abadingekayo balesi simiso. Kuzoba lula futhi ukubuyekeza lawa madrayivu noma ukuwasebenzisa ngabakhiqizi, abazovele basebenze ku-Android naku-GNU / Linux.
Akungabazeki ukuthi, izindaba ezilindelwe isikhathi eside hhayi kuphela zabakhiqizi ngoba kungadalwa abashayeli be-Android noma i-Linux kernel futhi umsebenzi wokugcina amabala ahlukene ngokuvuselelwa ngakunye kwe-Android kernel ungancishiswa noma uqedwe. Abathuthukisi nabasebenzisi bazokwazi ukusebenzisa nokuthuthukisa izinhlelo kulezi zinhlelo ezimbili, bazisebenzise ngokuhlukile kwi-PC ngaphandle kwengozi yokungalingani noma kumadivayisi weselula ahlukile futhi babenze bahlanganyele ngaphandle kwezinkinga.
Kepha i-Android akuyona ukuphela kwalokho. Futhi kufakwe ukusekelwa kwama-processor we-Texas Instruments c64x kanye ne-c66x, asetshenziswa kumaphrinta, imishini yezokwelapha namanye amadivayisi. Kungezwe ukuthuthuka okuthile kusistimu yefayela, ukuphathwa kwememori, ukuphepha nokunye. I-kernel entsha iphinde ihlanganise i-Open vSwitch, uhlelo lokuphatha idatha yedatha phakathi kwemishini ebonakalayo.
Ukubona imininingwane yezobuchwepheshe yazo zonke izici ezintsha ezifakwe kule nguqulo, ngincoma ukuthi kufundwe iKernelnewbies:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » I-Android ibuyela ku-kernel 3.3
Command "sl" ... ukuze ungalenzi iphutha nge- "ls"